-नेप्सका प्रमुखलाई पद खारेजीको पत्र, अब कता जाल सेयर बजार ? :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
नेप्सका प्रमुखलाई पद खारेजीको पत्र, अब कता जाल सेयर बजार ?
अर्थ संसार,काठमाडौं– सरकारले कांग्रेसलाई काउन्टर दिँदै देउवा सरकारले सात महिनामा गरेका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकायरी अधिकृतको नियुक्ती खारेजीको पत्र काटेको छ । खारेजी पत्र अर्थ मन्त्रालयमा आइसेकेको छ ।
खारेजी पत्र अबको केही दिनभित्र पुँजी बजारका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद हातमा आइपुग्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । तर, यता नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद भने आफ्नो पदको बचाउ गरिरहेका छन् ।
आफू राजनीतिक नियुक्त भन्दा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएकाले सरकारको यो निर्णय गैर कानूनी भएको भन्दै कानूनी उपचार खोज्ने तयारी गरिरहेका छन् । असोज २३ गते त्यतिखेरको नेपाली कांग्रेसको सरकारले ४ वर्षको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा चन्द्रसिंह साउदलाई नियुक्त गरेको थियो ।
निरन्तर ओरालो लागिरहेको सेयर बजारमा नेप्सका कार्यकारी अधिकृत साउद हटाउँदा अब सेयर बजार कता जाला भन्ने आम लगानीकर्ताको चासोको विषय बनेको छ । सरकारको बुधबार बसेको बैठकले नेप्सेका प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गरेसँगै सेयर बजार बिहीबार ३६ अंकले बढर ४६ करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको थियो ।
त्यसैगरी (आज) आइतबार पनि ०.०२ अंकले घट्दा कारोबार भने ४८ करोड भएको छ । सेयर बजारमा भएको यो नेप्से र कारोबार रकममा वृद्धि धेरै महिनापछिको हो । यसले सेयर बजारमा सकरात्मक संकेत देखाएको एकतरी लगानीकर्ताको समूह बताउँछन् ।
तर, अब नियुक्त हुने कार्यकारी अधिकृतको हातमा पनि हुनेछ । उता, अर्र्का थरी समूह भने वर्तमान अधिकृतले लागू गरेका योजनाहरु आउने प्रमुखले भत्काउने होकी भन्ने डर राख्दछन् । नेप्सेले आगामी साउन १ गतेबाट अनलाइन कारोबार प्रणालीको परीक्षण थाल्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यसको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी एकेएस इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एन्ड सर्भिसेजलाई अनलाइन ट्रेडिङ सफ्टवेयरको युजर एसेप्टेन्स टेस्ट (यूएटी) ले तयारी गरिरहेको छ । सेयर लगानीकर्ताहरु भने नेप्सेका प्रमुख पद खाली हुँने वित्तिकै छिटो भन्दा छिटो प्रमुखमा नियक्त गर्न राजनीतिक दलका नेतालाई भेटी आग्रह गरिरहेका छन् ।
यस्तै चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल सदःय विजय देउजा, सेन्सर बोर्डका उमेश खड्का, देवीराम पराजुलीको नियुक्त पनि बदर भएको छ । नेपाल टेलिभिजनका सल्लाहकार किरण चित्रकार, राससका सञ्चालक समिति सदस्य एकराज पाठक, नेपाल टेलिभिजनका सञ्चालक समिति सदस्य गोविन्द धितालले पनि नियुक्ति बदरको चिठी पाएका छन् ।